Madaxwayne Siilaanyo iyo Wafti uu Hogaminaayo oo La Filayo in ay Dalalka Dibada Qaarkood Safar ugu Baxaan | Hangool News
Madaxwayne Siilaanyo iyo Wafti uu Hogaminaayo oo La Filayo in ay Dalalka Dibada Qaarkood Safar ugu Baxaan
Hargeysa(Hangoolnews)Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay socdaal ku tagaan dalka isu tagga Imaaraadka Carabta. Sidaas waxa Geeska Afrika u sheegay ilo xogogaala.
Madaxweyne Siilaanyo, ayaa la sheegayaa inuu dalkaas kulamo kula soo yeelan doono qaar ka mid ah madaxda Imaaraadka Carabta, waxaana la filayaa in madaxweynaha ay madaxda Imaaraadku kala hadli doonaan dekedda Berbera oo ay shirkadda DP World aad u xiisaynayso in maamulkeeda lagu wareejiyo si ay maalgashi ugu samayso.
Weftiga, madaxweynaha ayaa la filayaa inuu ka mid noqon doono wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiiro kale. Sidoo kale waxa Madaxweynaha safarkiisa ku wehelin doona wakiilka Somaliland u qaabilsan Imaaraadka Carabta Baashe Cawil oo ah wiilka uu Madaxweyne Siilaanyo sodoga u yahay.